» नायिका आँचल शर्माको पक्षमा नायक पल शाह (भिडियो)
१८ माघ २०७५, शुक्रबार ०६:०२
हेटौँडा, १८ माघ । नेपाली सिने क्षेत्रमा ‘आँप’ जोडीका रुपमा परिचित चर्चित नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्माको जोडीलाई मन पराउने दर्शकहरु निकै नै छन् । यी दुईको अन स्क्रिन जोडीलाई वास्तविक जीवनमै एक भएको हेर्न चाहाने फ्यानहरु पनि प्रशस्तै छन् । पल र आँचललाई एक भएको हेर्न चाहाने दर्शकले यी दुईको चलचित्रलाई समेत मन पराउने गरेका छन् ।
आँचल र पलको प्रेम र विवाहसम्मको कुरा सोच्ने दर्शकहरुले केही समय यता एकै चलचित्रमा यो जोडीको अभिनय हेर्न पाएका थिएनन् । चलचित्रमा यो जोडीको प्रेम जति देखिन्छ वास्तविक जीवनमा पनि एकअर्कालाई मित्रताको रुपमा उत्तिकै प्रेम गर्छन् भन्ने कुरालाई पछिल्लो घटनाले उजागर गरिदिएको छ । आँचल शर्मा अभिनित पछिल्लो चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ को ‘भिजिट भिसामा’ बोलको गीत सार्वजनिक समारोहमा आँचललाई एक पत्रकारले अन्तरवार्ताका लागि समय नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । त्यसको जवाफमा दुःखी हुँदै नायिका आँचल शर्माले सार्वजनिक समारोहमै माफी समेत मागेकी थिईन् ।
आँचललाई बिना कारण माफी मगाएको प्रति नायक पल शाह निकै आक्रोशित देखिए । उनले आँचलको सपोर्ट गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत स्टाटस पोष्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘माफ मगाउँदैमा र माफ माग्दैमा कुनै पनि समस्याको हल हुँदैन, अनि ११–१२ बजे सम्म एयरपोर्टमा ईन्टरभ्यूको लागि बस्नु भनेको उहाँहरु आफैको जब् थियो त्यो बुझ्न जरुरी छ । कलाकारको लागि हामी रात भरि एयरपोर्टमा बस्यौँ भनेर गर्जिनु कती उपयुक्त होला ? अनि कलाकारसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने पनि सिक्ने कि ? नबुजेकोकुरा ।’
उनको यस स्टाटसले आँचलप्रति उनको सम्मान र मित्रतालाई दर्शाएको छ । पलको स्टाटसमा नायिका आँचल शर्माले पलजस्तो साथी पाएकोमा खुशी भएको भन्दै रिप्लाई समेत गरेकी छिन् । आँचल सहित हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्प खड्का, वर्षा राउत अभिनित भिजिट भिसामा गीत यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युब ट्रेण्डिङको दोस्रो नम्बरमा छ । गीतलाई १७ लाख ८३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
आँचल र पलसँग रमाईलो कुरा, आँचलले खोलिन् पोल
पलको गालामा आँचलको थप्पड
पल र आँचलको प्रेम छताछुल्ल
आँचलको आँखामा ब्ल्याकको कथा
जोनी जेन्टल म्यानमा पल र आँचलको प्रेम
शत्रु गतेको प्रचारमा आँचल र पलको यस्तो मस्ती
पल र आँचलको मज्जाको डान्स
फ्यानहरुले बनाए पल र आँचलको ट्रेलर
आँचललाई बाटोमै मंगलसुत्र र पिरतीको बर्को
तिलहरी दिएर आँचललाई फकाउँदै